Holtop DC Inverter DX Ikuku Ijikwa Ikuku
HOLTOP HFM usoro DX Air Ijikwa Unit agụnye DC Inverter DX ikuku conditioner n'èzí unit na mgbe nile DX ikuku
conditioner n'èzí unit ndị a abụọ usoro. Ike nke DC inverter DX AHU bụ 10-20P, ebe ike nke oge niile
DX AHU bu 5-18P. Na ndabere nke mgbe nile DX AHU, ọhụrụ mepụtara DC Inverter DX AHU adopts na enwekwukwa vepo.
ọgwụ technology imeghe a ọhụrụ oge nke ala-okpomọkụ kpo oku. Ihe ohuru ohuru nke usoro ikuku nke ikuku na onwe ya
Usoro nchịkwa na-enye egwuregwu zuru oke na arụmọrụ ngwaahịa ma wetara ndị ọrụ ahụmịhe ikuku ikuku dị mma karị.
Ihe nhicha ikuku na arụ ọrụ disinfection
Molekụla na-agbasa teknụzụ ikuku disinfection type purter sterilization rate is to 99.9%. Airkwụ Nzipu Dị Mfe (CADR): 480m3 / h, kwesịrị ekwesị maka mpaghara 40-60m2. Ikike wepu isi ma sachaa PM2.5, haze, pollen, ájá, VOCs. Achọpụtala ihe nzacha ahụ nke ikuku na oghere nchọpụta microbiology. Ọnụ ọgụgụ igbu egbu maka nje H1N1 na nje H3N2 bụ ihe dịka 99.9%.
Industrial AHU na-akpan mere maka oge a na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, dị ka Automotive, Electronic, Spacecraft, Pharmaceutical wdg Holtop na-enye ihe ngwọta aka ime ụlọ ikuku okpomọkụ, iru mmiri, ịdị ọcha, ọhụrụ ikuku, VOCs wdg
1. Weghara na-egbu virus na elu arụmọrụ. Wepu H1N1 karịa 99% n'ime otu elekere.
2. Obere nsogbu na-eguzogide uchu na 99.9% uzuzu filtration ọnụego
3. ellingkwanye ụdị ntinye maka ụlọ ọ bụla na ohere azụmahịa
N'elu ụlọ packaged ikuku conditioner adopts ụlọ ọrụ na-eduga R410A mpịakọta Compressor na mụ arụmọrụ arụmọrụ, na ngwugwu unit nwere ike etinyere n'ime dị iche iche ubi, dị ka ụgbọ okporo ígwè njem, ulo oru osisi, wdg Holtop n'elu ụlọ packaged ikuku conditioner bụ gị nhọrọ kasị mma maka ebe ọ bụla ebe chọrọ obere mkpọtụ ime ụlọ na ọnụ ala nwụnye ala.
Single Room Wall Mounted Ductless Okpomọkụ Energy Recovery Ventilator
Nọgide na-emegharị okpomọkụ na nhazi ihu igwe n'ime ụlọ
Gbochie oke ime ụlọ iru mmiri na ebu Mee-elu
Belata okpomoku na ikuku ikuku
Ọhụrụ ikuku ọkọnọ
Wepụ ikuku na-adịghị mma n'ime ụlọ ahụ
Na-eri obere ume
Ọrụ ịgbachi nkịtị
High oru oma seramiiki ike regenerator
Buit-na okpomọkụ mgbapụta usoro iji nweta multiple mgbake ike na elu arụmọrụ; Ọ nwere ike na-wok dị ka ọhụrụ ikuku conditioner na azụmahịa oge, ezi onye na ntụ oyi usoro; Temperaturenọgide okpomọkụ na iru mmiri akara nke ọhụrụ ikuku, na CO2 ịta akara, na-emerụ gas na PM2.5 ọcha iji mee ka ikuku dị jụụ na ahụike. Njirimara nke Vetikal Type Okpomọkụ mgbapụta Energy Okpomọkụ Recovery Ventilator:
Mpempe Sanwichi ajị anụ ajị anụ ọnụ
All DC Inverter VRF Ntụ oyi
VRF (Igwe ikuku jikọtara ọnụ) bụ ụdị nke ikuku ikuku nke ikuku, nke a na-akpọkarị "otu jikọọkwuo" na-ezo aka na usoro ikuku jụrụ oyi nke otu mpaghara dị n'èzí jikọtara nkeji abụọ ma ọ bụ karịa n'ime ime ụlọ site na piping, akụkụ dị n'èzí na-anabata ikuku-ikpo ọkụ ọkụ na-eme ka ikuku gbanye ihu na n'akụkụ ime ụlọ na-akwado ụdị ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-eji usoro VRF eme ihe n'ọtụtụ obere na obere ụlọ na ụfọdụ ụlọ ọha. Njirimara nke VRF Ce ...
Siri Nkebi Nkebi nke AHU Case;
Iduzi teknụzụ na-eduzi ikpo ọkụ ọkụ;
Elu arụmọrụ jụrụ / kpo oku mmiri coils;
Ngwongwo ikuku na-arụ ọrụ n'akụkụ ụlọ elu na ikuku oyi iji kesaa ma kwado ikuku site na usoro nke kpo oku, ikuku, na obi jụrụ ma ọ bụ ntụ oyi. Onye na-ekpuchi ikuku na mpaghara azụmahịa bụ nnukwu igbe nke nwere ihe na-ekpo ọkụ na ihe dị jụụ, onye na-afụ ọkụ, racks, ụlọ, na akụkụ ndị ọzọ na-enyere onye na-ahụ maka ikuku aka ịrụ ọrụ ya. Ejiri ikuku na-arụ ọrụ na ikuku na ikuku na-esi na nhazi ikuku na-arụ ọrụ ahụ, wee ...